१२ भाषा तोकिने भयो सरकारी कामकाजी भाषा - Samadarshi Sanchar
१२ भाषा तोकिने भयो सरकारी कामकाजी भाषा
समदर्शी संचार, शनिबार, १२ भदौ, २०७८, दिउँसोको १२:१३ बजे
काठमाडौँ १२, भदौं । भाषा आयोगको सात प्रदेश कै लागि सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्ने तयारी रहेको छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक अनुसार कामकाजी भाषा तोक्न लागेको हो । धेरै वक्ता संख्या भएका मगर,मैथिली र थारू भाषा २÷२ प्रदेशमा लागू गर्ने सम्भावना छ ।
त्यसैगरी तथ्यांकमा वक्तासंख्या १८ जना मात्रै भएको खस भाषा कर्णाली प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न विज्ञको राय छ ।
प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, एकभन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानेर सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न लागिएको हो ।
त्यस अनरुप १ लाख बढी वक्ता रहेका भाषा प्रदेशगत रूपमा सिफारिस गर्न योग्य मानिएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा मैथिली, लिम्बू र बान्तावा भाषा पर्दछन् । प्रदेश २ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मती प्रदेशमा तामाङ र नेवारी रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा मगर र गुरुङ भाषा, लुम्बिनीमा थारू (डगौरा) र अवधी रहेको तथ्याङ्क छ । कर्णाली प्रदेशमा मगर, खस–नेपाली भाषा छन् भने सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारू (राना) भाषा रहेका छन् ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा सरकारी कामकाजको भाषालाई विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुन सक्ने गरी सिफारिस गरिएको आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले बताउका छन् ।
मुलुकमा १ सय २३ भाषा भएको तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो पटक आयोगले थप ८ वटा भाषा पहिचान गरेको हो । तीमध्ये १९ वटा भाषा १ लाख बढीले बोल्ने गर्दछन् । शेर्पा, राजवंशी, राई, बज्जिका, उर्दू, अछामी, बैतडेली भाषा भने सरकारी कामकाजको भाषा बन्न नसक्ने बताईएको छ । राई भाषा १ लाख ५९ हजार १ सय १४ वक्ता रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ  तर, ‘राई’ जातिमात्र रहेको छुट्टै राई भाषा नरहेको भाषाशास्त्रीले उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञ र स्थानीयबीच भएको छलफलबाट सिफारिस प्रतिवेदन बनेको हो । ‘आयोगले जिल्लागत रूपमै क्लस्टर बनाएर छलफल ग¥यो र त्यसमा स्थानीय तहको समेत सहभागिता रह्यो,’ उनले भने ।